परमेश्वरको सिद्ध रिस — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
तिमी मेरो साथ बारी छैन. प्रस्थान मा 17, इस्राएलका मानिसहरूलाई भने तिनीहरूले उहाँलाई विश्वास गर्न सक्दैन रूपमा अभिनय गरेर परमेश्वरको परीक्षण. सबै पछि उहाँले तिनीहरूलाई लागि पूरा, तिनीहरूलाई आफ्ना मानिसहरूलाई बनाउने, दासत्वबाट तिनीहरूलाई प्रदान, तिनीहरूलाई त्यसैले लागि र प्रदान, तिनीहरूले उहाँलाई अझै पनि विश्वास छैन. त्यसैले तिनीहरूले मोशालाई संग लड्न र अब तिनीहरूलाई पानी दिन उसलाई भन. उहाँले मर्न मरुभूमिमा तिनीहरूलाई ल्याए किन तिनीहरूले उहाँलाई सोध्न. र तिनीहरूले वास्तवमा प्रश्न, "हामीलाई वा बीच प्रभु हुनुहुन्छ?"
र यो यस पुस्ताका विशेषता भनेर grumbling र परमेश्वरको विरुद्धमा गनगन को प्रकारको छ. गन्ती गर्न छिटो अगाडि 14, फेरी पनि, लगभग एक दोहोरिने भङ्ग रेकर्ड जस्तै, तिनीहरूले फेरि गनगन र मिश्र मा फिर्ता गर्न यो राम्रो हुनेछ भनिरहेका छन्. तिनीहरूले उद्धार र उहाँको प्रतिज्ञा राख्न परमेश्वरले विश्वास गरेनन्.
यो भजन ती विशेष कथाहरू दुवै आपत्ति गर्न दिन्छ. र हाम्रो पदहरू हामीलाई उहाँमा भरोसा आफ्नो कमी परमेश्वरको प्रतिक्रिया देखाउन.
भजन मलाई साथ गर्नुहोस् 95:10-11.
चालीस वर्षसम्म म त्यस पुस्ताका संग रिसाए; म भने, "तिनीहरूले जसको हृदय हराउनु जाने एक मान्छे हो,र तिनीहरूले मेरो मार्ग ज्ञात छैन। "म मेरो क्रोध शपथ मा घोषणा त्यसैले, "तिनीहरूले कहिल्यै मेरो विश्राममा प्रवेश गर्नेछौँ।"
हामी यो पाठ यस साँझ देखि तीन संक्षिप्त बुँदा विचार गर्न जाँदै हुनुहुन्छ.
म. पाप परमेश्वरको रिस Provokes
पाठ फेरि सुन्न. परमेश्वरको भन्छन्, "चालीस वर्षसम्म मैले त्यस पुस्ताका संग रिसाए…" खैर म धेरै स्पष्ट प्रश्नको जवाफ विचार. परमेश्वरको रिसाउनु गर्छ. र यो रिस provokes कि उहाँको मान्छे को पाप हो. तर मलाई लाग्छ छैन त्यहाँ कुनै पनि आश्चर्य आफ्नो पाप परमेश्वरको रिस गरे भनेर यहाँ हुनुपर्छ. यो परमेश्वरको पाप कसरी जवाफ छ.
बढ्दो अप म राम्रो पिता भएको थियो, जो मायालु र ध्यान दिएर थियो र हामी एउटा राम्रो सम्बन्ध थियो. तर म कहिल्यै उहाँले मा हुन लाग्नुभएको थियो के मुड थाह. सामान प्राप्त र स्थानहरू जान चाहे जो एक बच्चा लागि त, म प्रकार म खेल खेल्न थियो जस्तै लाग्यो. म केहि सोधे अघि, म प्रकार उहाँलाई बाहिर महसुस र उहाँले थियो मुड कस्तो हेर्न प्रयास. "ती Cowboys पल्ट कसरी, पिताजी? तपाईंको सैलुन निश्चित राम्रो देखिन्छ। "अनि ती feeler प्रश्न मलाई अहिले वा पछि सोध्नुपर्छ भने बाहिर आंकडा मदत. तर मेरो विधिहरू सही थिए. उहाँले आनन्द संग जवाफ भने त जब मैले सोधें म पक्का लागि थाह सक्छ ("निश्चित, छोरा!") वा रिस ("Outta मेरो अनुहार प्राप्त, छोरा!"). उहाँले त्यो बाटो मा अप्रत्याशित थियो.
खैर हामी परमेश्वरको मा unpredictability यस प्रकारको आशा हुँदैन. परमेश्वरको रहस्यमय तरिकाले काम गर्दछ. त्यसैले परमेश्वरले थुप्रै तरिकामा अप्रत्याशित छ, तर पाप उहाँको प्रतिक्रिया बारे केही अप्रत्याशित त्यहाँ. यो उहाँको क्रोध provokes. उहाँले आदम र हव्वाले प्रतिज्ञा, तिनीहरूले उहाँलाई आज्ञा उल्लङ्घन यदि तिनीहरूले मर्ने. किनभने पापको उहाँले भुइँमा खोल र मानिसहरूलाई यो माध्यम गन्ती मा पातालमा तल गिरा 15. र घटनाहरू यो भजन मा गर्न alluded, परमेश्वरको फेरि रिस संग जवाफ. पाप परमेश्वरको क्रोध provokes.
वास्तवमा, अनुवाद गर्नुपर्छ भन्ने वाक्यांश म त्यस पुस्ताका संग रिसाए, शाब्दिक अर्थ थप "म त्यस पुस्ताका loathed।" त्यो धेरै अनुवाद भन्न के. यो घृणा को यस तस्वीर संचार. परमेश्वरको किनभने तिनीहरूले गऱ्यौ कति को यो मान्छे वाक्क छ. हाम्रो प्रश्नको जवाफ त, परमेश्वरको रिसाउनु गर्छ र उहाँले बेतोडले संग अघिल्लो पुस्ता को पाप प्रतिक्रिया, पवित्र, घृणा.
अब म यस सक्छन्, परमेश्वरको केही मानिसहरूको अवधारणा विरुद्ध अप रगडना. तिनीहरूले विचार, "ठीक छ भनेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मेरो परमेश्वर छैन. मेरा परमेश्वर रिसाउनु छैन. मेरा परमेश्वर भनेर भन्न कहिल्यै। "राम्रो तिमी सही हुन सक्छ. शायद तपाईंको देवता भनेर भन्न छैन, तर बाइबल परमेश्वरको बस यो पाठ यहाँ गरे.
त्यसैले एउटा समस्या यहाँ छ? कसरी सक्छ एक पूर्ण, पवित्र परमेश्वर यति लगातार क्रोधित क्रोध र पनि घृणा संग प्रतिक्रिया? म लगातार रिस मेरो पत्नी प्रतिक्रिया र उनको मा गुस्सा भने, मेरो भाग मा एक भयानक पाप हुनेछ. परमेश्वरको क्रोध, हुनत, हाम्रो जस्तै पापी छैन. यो एक अक्षर दोष छैन.
रूपमा म यो प्रचार, म वरिपरि खुट्टाको औंला सुझाव वा परमेश्वरको क्रोध लागि क्षमा गर्न आवश्यकता महसुस छैन. अनि तपाईं या त परमेश्वरको क्रोध बारेमा आफ्नो गैर-मसीही मित्रहरुलाई माफी माग्न आवश्यकता महसुस हुँदैन. वा नरक बारेमा. परमेश्वरको पापी विगतका बारेमा केही गोप्य लीक भएको जस्तो र तपाईं पुरानो नियममा उहाँको न्याय बारेमा लज्जित छैन.
परमेश्वरको क्रोध पाप छैन. यो पवित्र परमेश्वरको पाप प्रतिक्रियालाई छ. यो मात्र पवित्र कस्मिक विद्रोह र राजद्रोहको उहाँको छवि बनेको मानिसहरूबाट प्रतिक्रिया छ. आफ्नो मानक परमेश्वरको यकिन गर्न प्रयास नगर्नुहोस्, किनभने उहाँले मानक छ. हाम्रो रिस पापी छ, किनभने हामी पापी हुन्. तर एक पूर्ण पवित्र परमेश्वरको रूपमा परमेश्वरको मात्र एक धार्मिक तरिकामा क्रोधित हुन सक्छ.
पाप परमेश्वरको ऐंजर्स भनेर मात्र कुरा छ. र यो सधैं परमेश्वरको ऐंजर्स. र हरेक पापी एउटा क्रोधित परमेश्वरको जवाफ हुनेछ, तरिका नभएसम्म तिनीहरूलाई उद्देश्य परमेश्वरको क्रोध को हेरचाह गर्न सकिन्छ.
आवेदन: पाप गर्दा हामी कहिलेकाहीं, हामी त्यो खराब होइन सोच्न परीक्षा हुनुहुन्छ. म एक मसीही थियो अघि मलाई थाहा, र पछि पनि कहिले काँही कि, म एक ठूलो सम्झौता रूपमा पाप को थिएन. तर यो म बारेमा विचार सबै म केही नियमहरू भंग भएको थियो कि थियो किनभने छ. म पर्याप्त नैतिक थिएनन्. खैर पाप पर्याप्त नैतिक हुन सिर्फ एक विफलता भन्दा बढी छ. सबैभन्दा विश्वासी व्यक्ति - यो एक व्यक्ति विरुद्ध एक ठेस छ. र यो व्यक्तिको शोकित र उहाँलाई क्रोधित बनाउँछ. परमेश्वरको पाप घृणा.
शायद कि तिमी पूरा गर्दैन. शायद तपाईंलाई लाग्छ कि परमेश्वरको overreacting छ. म साँच्चै उहाँ चालीस वर्षसम्म क्रोधित अर्थ? उहाँले एक विद्वेष पकड जस्तो लाग्दछ. पैटी को प्रकारको ध्वनि, परमेश्वरको. किन उहाँलाई त पागल बनाउँछ? खैर मलाई दुई दर्शाउन ल्याउँछ.
द्वितीय. पाप वैकल्पिक मार्ग
पद हेर 10 फेरि. परमेश्वरको उहाँले रिसाउनुभएको थियो यो पुस्ता को विवरण दिन्छ. उस्ले भन्यो, "तिनीहरूले जसको हृदय हराउनु जाने एक मान्छे हो, र तिनीहरूले मेरो मार्ग ज्ञात छैन। "
परमेश्वरको तिनीहरूले आफ्नो हृदय मा हराउनु जाने भन्छन्. तिनीहरू केवल हराउनु बाह्य आफ्नो कार्यहरू मा जाने. तर उनको भित्री अस्तित्व मा, तिनीहरूले जो को कोर मा, तिनीहरूले हराउनु जाने.
म भयानक हुनु हुनेछ - म बिल्कुल भयानक अर्थ - निर्देशनहरू संग. त्यसैले शायद एक साप्ताहिक आधार मा मेरी श्रीमती मलाई कहीं केही प्राप्त वा केही बन्द ड्रप र त म उनको कल बिना यो बनाउन छैन पठाउन वा यसलाई पाँच पटक मलाई रूपमा लामो लिन्छ. र यो उनको निर्देशन खराब थिए किनभने छैन, म गलत पालैपालो बनाउन किनभने र गलत बाटो जाने र आसपास गरिएका प्राप्त यो हो.
खैर यो उहाँले तिनीहरूको हृदय हराउनु जाने भन्छन् गर्दा यहाँ चित्रित कि तस्वीरको प्रकारको छ. तिनीहरूको हृदय गलत बाटो यात्रा र गलत ठाउँमा तिनीहरूलाई नेतृत्व. तिनीहरू हराएका हुनुहुन्छ. र नै सबै पापको सकिन्छ. सबै पाप बस बाह्य भन्दा बढी छ, किनभने हाम्रो मन गलत दिशा जाने यो हुन्छ. र हाम्रो कार्यहरू पालना.
अनि उहाँले पनि भन्छन्, "तिनीहरू मेरो तरिका ज्ञात छैन।" उहाँको कृपा र उहाँको शक्ति - परमेश्वरको चरित्र तिनीहरूलाई अघि पूर्ण प्रदर्शनमा भएको थियो, आदि. अनि उहाँले तिनीहरूलाई उहाँको तरिका पछ्याउन आज्ञा दिनुभयो, उहाँको बाटो पछ्याउन. तर यसको सट्टा तिनीहरूले अर्को बाटो पछ्याउन छनौट. उहाँले एक जो फिरऊन देखि तिनीहरूलाई वितरण र लाल समुद्र विभाजित गर्नुपर्छ! यो तिनीहरूले देखेपछि उहाँलाई भरोसा छैन भनेर अकल्पनीय छ. तिनीहरूले उहाँको काम देखे, तर तिनीहरूले उहाँको तरिका थाहा थिएन.
क्रिश्चियन, तपाईं सजग छन् यो पाप गर्दा तपाईं गरिरहनुभएको के छ भनेर? तपाईं बस घोडा बन्द झर्ने हुनुहुन्छ कि छैन वा आफ्नो पूर्ण क्षमता छोटो आउँदै? तपाईं परमेश्वरलाई लागि बाहिर सेट छ कि एक वैकल्पिक बाटो रोजेर छन्. तपाईँले भन्नुभएको, "परमेश्वरले, म आफ्नो तरिका देखेका छौँ र म उनलाई रुचि छैन. म कसरी तिमी मलाई बाँच्न चाहन्छौं थाह छु, र म मेरो बाटो राम्रो छ विचार. म तपाईं र तपाईं राम्रो प्रभु भन्दा समझदार छु. म मेरो आफ्नै बाटो रोज्न लागिरहेको छु। "यो दुष्ट छ. र यो हामी हरेक समय के हामी पाप हो. हाम्रो पाप यस grumbling पाप भन्दा कुनै राम्रो छ, शङ्कालु, यो पाठ देखि दुष्ट पुस्ता.
हामी हाम्रो पापको सही विचार छ, वा हामी जस्तै हामीले पनि त्यसै गर्नुपर्छ यसलाई घृणा छैन. जे यसलाई सही तपाईंको पाप हेर्न लिन्छ के. यो कुरूप छ. यो धेरै बनाउन प्रयास नगर्नुहोस्. हामी पनि हामी यो कुरा बाटो परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ. हामी "हाम्रो पापको मात्र होइन विचार गर्नुपर्छ ओह, म युद्धमा हराएको. वा ओह, म यो संग संघर्ष छु। "कुनै हामी परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने छनौट. हामी भन्दा अन्य केहि गर्न छनौट परमेश्वरले हामीलाई के गर्न आज्ञा के, किनभने हामी उहाँले भन्न छ के रुचि छैन. पाप को तितो वास्तविकता छ. र पनि विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको इच्छाअनुसार गर्न चाहने रूपमा, हामी हाम्रो पाप मा सही दृष्टिकोण राख्न लड्न छन्.
राल्फ Venning अन्तर्गत यो खडा हामीलाई मदत गर्छ पाप को पापले जब उहाँ भन्नुहुन्छ, "छोटकरीमा, पापले परमेश्वरको न्यायको हिम्मत छ, उहाँको दया को बलात्कार, धैर्य को jeer, आफ्नो शक्ति को अलि कति, आफ्नो प्रेमको घृणा. हामी मा जाने र भन्न सक्छ, यो आफ्नो Providence को upbraiding छ, आफ्नो प्रतिज्ञा को देखेर, आफ्नो बुद्धिको निन्दा। "
भजनहार यहाँ दिन्छ चेतावनी शब्दहरू सुरु, "आफ्नो हृदय कठोर छैन।" साधारणतया अर्थ झन् हठी बन्न छैन र परमेश्वरका आज्ञाहरू अस्वीकार. र त्यो चेतावनी साथै हामीलाई लागू. किन हिब्रू को लेखक यो खण्ड अप लिन्छ र झर्ने टाढा विरुद्ध हिब्रू यस्तो चेतावनी दिन्छ यो छ.
जब तपाईं हठी परमेश्वरको आज्ञा अस्वीकार, तपाईं हृदय कठिन र कठिन समय हुन्छ. साँच्चै कडा हृदय सामान्यतया समय को लामो फैलिएको भन्दा हुन्छ, छैन रातारात. हामी जो अपश्चात्तापी पाप मा पुग्छन् व्यक्ति को प्रकारको कहिल्यै छौँ लाग्छ, तर हामी सकेजति. साँच्चै कडा हृदय समय हुन हामी माथि र अधिक र फेरि साना कुरामा परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्न छनौट गर्दा. द्रुत यहाँ, त्यहाँ एउटा सानो झूट, र समय हामी पाप र यसलाई सफाइ सुरु गर्न desensitized बन्न. र अघि तपाईंलाई थाहा छ, हामी बस ढोंग हुनुहुन्छ, जब सम्म हामी ढोङ थकित प्राप्त र पूरै येशूको रोक्न. ती साना लडाई वास्तवमा विशाल गर्दै छन्.
तपाईं आज यहाँ हुनुहुन्छ भने त र आफ्नो जीवनमा रहन केही पाप अनुमति, पश्चात्ताप! अब! अरूलाई आफ्नो पाप स्वीकार. आफ्नो हृदय सख्त को यो चक्र सुरु नगर्नुहोस्. बरु आफ्नो तरिका भरोसा को, उहाँको थाहा. उहाँको तरिका पछ्याउन. येशूले भरोसा र उहाँको वचन विश्वास. उहाँले तपाईंलाई माया गर्नुहुन्छ र तपाईं आफ्नो राम्रो लागि आज्ञा दिनुभएको छ. उहाँको बाटो पछ्याउन.
ठिक छ, त्यसैले परमेश्वरको क्रोध पाप द्वारा सुनेपछि छ र पाप वैकल्पिक बाटो रोजेर छ. कै त? यो वैकल्पिक बाटो रोजेर को परिणाम के?
III. पाप परमेश्वरको विश्राममा हामीलाई राख्छ
पद्य सुन्न 11.
त्यसैले म मेरो क्रोध शपथ मा घोषणा, "तिनीहरूले कहिल्यै मेरो विश्राममा प्रवेश गर्नेछौँ।"
नतिजा हो कि परमेश्वरको क्रोध मा, उहाँले तिनीहरूलाई दण्ड हुनेछ. यस विशेष घटना मा, परमेश्वरले तिनीहरूलाई क्षमा, तर उहाँले तिनीहरूलाई प्रतिज्ञा गरिएको देशमा प्रवेश गर्न अनुमति छैन. तर समय भजनहारले यस लेख्छन्, परमेश्वरको मान्छे पहिले नै प्रवेश गरेको छ. त्यसैले तिनले परमेश्वरको अनन्त बाँकी कुरा यो पाठ प्रयोग. र यो कसरी हिब्रू को लेखक यो पनि प्रयोग छ. परमेश्वरले हामी प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि अनन्त बाँकी छ, तर हाम्रो पापको यो हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ.
हामी मात्र होइन परमेश्वरको रिसाउनु भनेर यहाँ हेर्न, तर उहाँ आफ्ना रिसाएर निर्णय. वास्तवमा, यस खण्डमा उहाँले उहाँको क्रोध एउटा शपथ बनाउँछ. उहाँले पहिले उद्धरण को एक गर्न छैन भन्छन् ठ्याक्कै के गर्छ. तर उहाँको क्रोध छैन हाम्रो जस्तो fickle छ. यो सबै मानव रिस पापी छ भनेर भन्न छैन. तर उहाँको कहिल्यै छ. रिस उहाँलाई intoxicate छैन र मूर्ख निर्णय गर्न उहाँलाई सार्न. सट्टा, उहाँको क्रोध स्तर लाग्यौं छ, पवित्र, र उहाँले अझै पनि भलाइ र न्याय संग जवाफ.
परमेश्वरको अनन्त बाँकी सुन्दर छ, शान्तिपूर्ण, गैर-तनावपूर्ण, परमेश्वरले आफ्ना साँचो मान्छे सबै मा अन्त हुनेछ भनेर ठाउँ महिमा. परमेश्वरको क्रोध पवित्र छ, बस, डरलाग्दो, ती लागि भाग्य आतंकित गर्नु जो तिनीहरूले के योग्य प्राप्त [reword]. त्यहाँ नरक मा कुनै बाँकी छ. त्यहाँ नरक मा कुनै राहत छ, मात्र दुःख र क्रोध. र हामी एक सेना वा मानिसको क्रोध कुरा गरिरहनु भएको छैन, तर सदाको लागि आफ्नो टाउको मा सार्वभौम परमेश्वरको क्रोध. परमेश्वरको क्रोध मात्र पुरानो नियममा अवस्थित छैन. उहाँले आज पाप अझै पनि घृणा. हामी यो अचम्मको परमेश्वरको डर गर्नुपर्छ. आफ्नो पाप परमेश्वरको विश्राममा तिनीहरूलाई पालन, र हाम्रो पनि गर्न सक्छन्.
यो यहाँ यो साँझ सबैका लागि हो. तपाईं मरेपछि, तपाईं परमेश्वरको विश्राममा या त हुनेछ प्रविष्ट गर्नुहोस् वा परमेश्वरको क्रोध सहन. ती मात्र दुई विकल्प हो. हामी सबै दोस्रो विकल्प योग्य. हामी सबै किनभने उहाँले वार्ता पापी पुस्ता जस्तै हो. हामी हाम्रो आफ्नै बाटो जाने. हामी हाम्रो मन मा हराउनु जाने र हामी उसको मार्ग पालन गर्दैनन्. हामी र अधिक र फेरि माथि परमेश्वरको ऐंजर्स कि धेरै कुरा गर्नुभएको.
त्यसैले हामी कुनै पनि लागि आशा छ? त्यहाँ छ.
मा 1 थिस्सलोनिकी 1:10, पावलले यी शब्दहरू गालीलमा देखि एक मानिस वर्णन, "आफ्नो पुत्रलाई स्वर्गबाट, उहाँले मृत्युबाट ब्यूँताउनुभयो जसलाई, येशूले आउन क्रोध हामीलाई जो सुनाउँछन्। "
र पछि 5:9-10 उहाँले विश्वासीहरूलाई भन्छन्, "परमेश्वरको लागि क्रोध लागि हामीलाई किस्मत छैन, तर मुक्तिको हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट मार्फत प्राप्त गर्न, भनेर हामी जागा वा सुतेको हो कि हामी उसलाई बाँच्न सक्छ, त्यसैले हाम्रो लागि मरेका। "
हाम्रो मात्र आशा येशूले छ. र उहाँले हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ.
"मा यो माया हो, छैन हामी परमेश्वरको प्रेम छ तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रा पापको लागि propitiation हुन आफ्ना पुत्र पठाउनुभयो भनेर। " 1 यूहन्ना 4:10
त्यहाँ एक कप थियो, क्रोधित क्रोध र रिसको पूर्ण परमेश्वरले हामीलाई बाहिर खन्याउन तयार थियो. तर ख्रीष्टमा हामी ती लागि, हामी क्रोध सहन छैन. सट्टा, परमेश्वरले हाम्रो टाउको माथि देखि कि कप लिएको छ र उहाँले यो सारियो गर्नुपर्छ. ख्रीष्टमा हामीलाई ती लागि, उहाँले हामी माथि भण्डारण कि क्रोध लिए, एक कप मा यो सबै पोखे, यो उहाँको पुत्रको टाउको माथि राखे र उहाँलाई सबै खन्याइएको. के महान् प्रेम! येशू क्रूसमा पापी लागि परमेश्वरको आतंकित गर्नु क्रोध सहेका. त्यो क्रूसमा मर्नुभयो, तर उहाँले हाम्रो विजयी राजाको रूपमा तीन दिन पछि उहाँको गम्भीर देखि गुलाब. अनि येशूले भन्नुभयो छ, "मलाई आउनुहोस्, सबै भारी लादेन भएका श्रम र, र म तपाईंलाई आराम दिनेछु। " (मत्ती 11:28)
सुसमाचार छ यो येशूले आफ्नो विश्वास गर्नेहरूलाई कि- परमेश्वर हाम्रो निम्ति बायाँ कुनै रिस छ. ख्रीष्टमा, परमेश्वरको अब हामीलाई रिसाउनुहुन्छ. पाप गर्दा हामी उहाँले हामीलाई दुःखित गर्नुपर्छ, तर हामी तिनीहरूलाई लागि सजाय हुनेछ. आशिषित मानिस जसको पाप उहाँको विरुद्धमा गणना छैन छ.
अनि हामी ख्रीष्टमा भरोसा गर्न जारी यदि, उहाँले फिर्ता गर्दा हामी ठूलो सट्टा आनन्द उहाँलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. र हामी भजन गाउन सक्छौं, "तैपनि यो मेरी प्राण छ।"
इवान • फेब्रुअरी 2, 2015 मा 9:41 बजे • जवाफ
धन्यवाद, यात्रा. म ख्रीष्ट मेरो पैदल मा एक ठूलो भूमिका खेलेका छ जो कसैले तपाईंलाई गरिएको छ किनभने केहि आफ्नो ले प्राप्त गर्न चाहन्थे. यो लामो हुनेछ, त्यसैले तपाईं यसलाई वरिपरि भने, म बुझ्दछु.
जब म केही वर्ष पछि मसीही भए, कुरा सरल थिए- येशूले पूर्ण भरोसा, परमेश्वरले तपाईंलाई सबै कुराको लागि forives (विगतका, वर्तमान, भविष्यमा), बस उसलाई भरोसा र उहाँले बाँकी हेरविचार गर्नेछन्. भावना विश्वासको आधार बनाउन छैन, तर फिर्ता ती दिनमा त्यहाँ स्थिर आनन्द थियो र आज्ञाकारी सोच म unconditionally क्षमा थियो देखि स्वाभाविक आए. आफ्नो पिताजी भरोसा र सिद्ध हुन जरूरत चिन्ता छैन जो केवल एक बच्चा. ध्यान सबै ख्रीष्टको धन्यवादी थियो. बाटो म यसलाई हेरिएको किनभने म पापको बारेमा चिन्ता गर्न आवश्यक छैन- मेरो काम येशूले विश्वास थियो, पवित्र आत्मा बाँकी को हेरविचार.
म शब्द थप र थप समय खर्च रूपमा, त्यहाँ म पहिले वर्णन भन्ने भरोसा / अनुग्रह जग हल्लाउँदै र मेरो बाल्यकाल मलाई फिर्ता लिए कि माथि आउने पदहरू थिए. मेरो बुबा विशेष गरी (जो समयमा विश्वासमा जवान थियो, त्यसैले म उहाँलाई विरुद्ध यो पकड छैन) उहाँको दया बारेमा सिकाउन यसलाई सन्तुलित बिना परमेश्वरको न्याय तनाव धेरै छिटो थियो. जस्तै, उहाँले कलिलो उमेर मा मलाई सिकाउनुभयो म क्रममा मेरा सबै पापको पश्चात्ताप गर्नुपर्छ भनेर बचत गर्न, तिनीहरूले अझै पनि परमेश्वरको व्यवस्था तोड्न गर्दा येशूले तिनीहरूलाई स्वागत गर्नेछ लाग्छ किनभने धेरै मसीहीहरूले न्यायको दिन मा एक अशिष्ट Awakening लागि हुनेछ, आदि. उहाँले tounges बोल्ने मा विशाल थियो, धेरै थोक तर भरोसा परमेश्वरको भाग मा धेरै हिट भएन.
थप र थप शङ्का मा crept र म गहिरो धर्मशास्त्र रुचि भए रूपमा, कतै लाइन साथ म बाहिर मेरो आफ्नै शक्तिमा कुराहरू लिन र सबै आंकडा गर्न प्रयास intellectually सट्टा नजिक चित्रकला र परमेश्वरले प्रतीक्षा ढाँचा सेट. म तपाईंलाई म Theological सामान अनुसन्धान खर्च गर्नुभएको घण्टा कति छैन बताउन सक्नुहुन्छ, अनुत्तरित प्रश्न, माथि ग्रीक मा पदहरू देख, आदि. यो गत वर्ष इन्टरनेटमा. मेरो विचार प्रक्रिया छ “राम्रो यदि येशूले यी अवस्था सबै छ, त्यसपछि म अवस्थाको पूरा निश्चित गर्न आवश्यक छ।” यसरी, मेरो पैदल बौद्धिक र perfectionistic भयो. के एक पटक त सरल utterly जटिल भए थियो, मेरो भरोसा लङ्गडो थियो, र यसरी म अहिले ख्रीष्टको मेरो पैदल मा एक राम्रो बोझ समयमा अझै पनि छु.
म ख्रीष्टियन भित्र दुई विरोध बाँणशैली शिविरमा सूचना र म सहमत हुन सक्छ निश्चित छु- 1) एक “आज्ञाकारी” शिविर र 2) येशूले यो सबै भुक्तानी” शिविरमा. यो आज्ञाकारी शिविरमा हाम्रो जिम्मेवारी जोड छिटो छ र सामान्यतया Synoptic Gospels references, प्रकाश, यस अतिरिक्त, आदि. येशूले एक्लै उहाँलाई भरोसा सबै शिविरमा तनाव यसलाई भुक्तानी र पावलले मा धेरै भारी निर्भर देखिन्छ. जब म पहिलो ख्रीष्ट हिंड्न सुरु, म निश्चित शिविर को मानसिकता थियो 2, तर थप म धर्मशास्त्र अध्ययन र (दुःखको कुरा, इन्टरनेटमा मानिसहरूको राय) म मेरो जीवन परिवर्तन गर्ने अनुग्रहको मेरो समझ शङ्कालु बारेमा धेरै चौंका भयो. शिविरमा 1 परमेश्वरको धार्मिकता र अपरिवर्तनीय प्रकृति जोर बारेमा ठूलो छ तर शारीरिक willpower आज्ञाकारिताको निर्माण गर्ने प्रयास देखिन्छ. तिनीहरूले जस्तै सामान सन्दर्भ हुनेछ “प्रभु, प्रभु… म कहिल्यै थाह” पद. शिविरमा2परमेश्वरको क्षमा र घाम र rainbows सामान जोर बारेमा ठूलो छ, उहाँले NT गर्न अतिरिक्त दुई पूर्ण बिभिन्न मानिसहरु भने तर परमेश्वरले चित्रण. तिनीहरूले केही परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग र सामान कि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ सन्दर्भ छौँ. परमेश्वरको सत्य को सन्तुलित बीचमा कहीं हुन छ, ठिक? मेरो लक्ष्य बस जसले उहाँ भन्नुहुन्छ लागि परमेश्वरलाई चिन्न र आफ्नो विशेषताहरु को सबै को एक बाइबलीय सन्तुलित समझ छ. म बारेमा निरन्तर चिन्तित छु किनभने म मुश्किल समय बस उहाँलाई भरोसा गर्न प्राप्त फिर्ता र उसलाई सम्बन्धमा रहेको भइरहेको छु “सबै बाहिर आंकडा गर्न सक्षम रहेको छैन” (म साह्रै मेरो आफ्नै समझ मा परेर छु). म अहिले सान्त्वना दिनु मात्र कुरा यो छ- पैदल फिर्ता प्राप्त र परमेश्वरको कुरा र उहाँले म सिर्फ उसलाई यो गर्न विश्वास थियो भने त्यो लिन आवश्यक छ जहाँ यो कुरा हुनेछ भनी भरोसा. यदि यी अवस्था सबै छ, त्यसपछि मेरो काम आफ्नो अनुग्रह मलाई तिनीहरूलाई पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ विश्वास छ.
धेरै माया, यात्रा.
Liz • अगस्ट 10, 2016 मा 8:52 छु • जवाफ
म आफ्नो गुस्से देखे, र तपाईं सही छौं. जब तपाईं ठूलो तस्वीर हेर्न त्यहाँ मूलतः दुई शिविरमा छन्. त्यहाँ हुनत ब्यालेन्स छ, र मलाई थाहा तपाईं यसलाई प्राप्त गर्न सक्छन्. म पाउन भन्दा प्राप्त प्रभु हामीलाई बताउँछ किनभने भन्न, “दस्तक ढोका उघारिनेछ”. वचन अध्ययन राम्रो छ, बन्द छैन. तर, तपाईं प्रार्थनामा पनि छन्? म दायित्व को एक भावना वा अनुरोध को एक लाँड्री सूची संग प्रार्थना कुरा छैन छु. तर, आफ्नो हृदय देखि साँच्चै प्रार्थना. यो अभ्यास केहि, म कसरी हाल आफैलाई राम्रो यो के गर्न सिक्दै गरिएको छ. पहिलो, उहाँले छ जो परमेश्वरको प्रशंसा. त्यसपछि क्षमा सोध्न, विशिष्ट क्षमा. कि पछि आफ्नो चिन्ता संग सिंहासन दृष्टिकोण, चिन्ता र बोझबाट. थप प्रशंसा संग यसलाई र्याप. त्यहाँ त्यस यो संग मदत गर्न सक्छ केही महान अनुप्रयोगहरू छन् (Examen र जाँच्नुपर्छ). दुवै प्रार्थना अनुप्रयोगहरू मेरो एउटा साथी अत्यधिक सुझाव दिने हो. म जो एक अझै सम्म गर्न निर्णय गरेको छैन. म पनि पुस्तक पढेर सुझाव थियो, व्यग्र, प्रिस्किला Shirer द्वारा. म अहिले यो पढ्दै छु. यो प्रार्थना र आध्यात्मिक युद्धमा बारेमा र यो यति ठूलो भएको! साँच्चै खोल्ने आँखा. म पश्चिमी समाजमा हामी आध्यात्मिक तवरमा सुतेको हो कि थप र थप सोच्दै छु. हामी प्रार्थना गर्न एक आकस्मिक दृष्टिकोण र आध्यात्मिक युद्धमा एक परी कथा छ – तर यो सबै धेरै वास्तविक छ. तपाईं प्रार्थना शान्ति पाउनुहुनेछ – आफ्नो प्रश्नहरूको बारेमा परमेश्वरले संग कुरा. यो प्रश्न ठीक छ. म यो हेर्न सक्षम हुनुहुन्छ आशा र मलाई आशा छ यो तपाईं इवान मद्दत गर्छ!
ख्रीष्टमा आफ्नो बहिनी,
जिमी जर्सी हेस • नोभेम्बर 24, 2015 मा 12:42 बजे • जवाफ
Keenan एलन जर्सी • डिसेम्बर 12, 2015 मा 12:17 बजे • जवाफ
त्यहाँ धेरै आउटडोर बीच बल साथ सँगै इनडोर भलिबल देखि variances छन्. गर्न उपयोगी प्राप्त गर्न मुश्किल कुरा वास्तवमा छ तपाईं वास्तविक चोट चूना पत्थर foward सार्न. एक पिछवाडे चाल केवल साधारण छ3चरण प्रविधी जहाँ तपाईँले ऊंची उडान भरना रूपमा अगाडि जान भन्दा सीधा शुरू.